« Newer Entries ဂျပန်သို့ ဝင်မည့် မုန်တိုင်း MAN-YI – 16W နှင့် မြန်မာ့မိုးလေဝသအခြေအနေ
Leaveacomment Uncategorized ဂြိုလ်တုဓါတ်ပုံနှင့် ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်တို့ဖြင့် မိုးလေဝသအခြေအနေကို ခန့်မှန်း လေ့လာခြင်း
Leaveacomment Uncategorized မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်နှင့် မိုးလေဝသ အခြေအနေ
Leaveacomment Uncategorized မေလ ၁၀ ရက်မှ ၂၄ ရက် အထိ မြို့ကြီးအချို့ မိုးရွာနိုင်ခြေဇယား
One comment Uncategorized တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှ ရွေ့လျားလာမည့် မုန်တိုင်း ၂ လုံး
By mmweather.ygn, on September 26th, 2011%
HAITANG(21W) တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင်ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် အပူပိုင်းမုန်တိုင်း HAITANG သည် စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် လေဖိအားနည်းဆဲလ်အဖြစ် စတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ ပြီး တဖြည်းဖြည်းအင်အားပိုကောင်းလာကာ စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ၆ နာရီခွဲတွင် လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်းအဖြစ်သို့ စတင်ရောက်ရှိပြီး၊ စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက် နေ့လည် ၁၂ နာရီခွဲ တွင် အပူပိုင်းမုန်တိုင်းအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ အပူပိုင်းမုန်တိုင်း HAITANG သည် ဗီယက်နမ် ကမ်းခြေကို Quang Binh ပြည်နယ် Dong Hoi မြို့တောင်ဘက် ၃၅ မိုင်ခန့် Quang Tri ပြည်နယ် အစပ်မှ လာမည့် ၂၄ နာရီအတွင်း ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ဘွယ်ရှိနေပါသည်။အပူပိုင်းမုန်တိုင်း HAITANG . . . → Read More: တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှ ရွေ့လျားလာမည့် မုန်တိုင်း ၂ လုံး
Leaveacomment Uncategorized ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာမှ မုန်တိုင်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် မိုးပိုလာဦးမည်လား
2 comments Uncategorized « Newer Entries Copyright © 2017 MMWeather Information BLOG Log in - All Rights ReservedPowered by WordPress & the Atahualpa Theme by BytesForAll. Discuss on our WP Forum